Ipropathi iyathengiswa eCanyon Lake, eTexas
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » US » Texas » Ipropathi iyathengiswa eCanyon Lake, eTexas1
Ikhowudi yeposi: 78133
IKhaya elitsha eliMnandi eliBini eliHamba ngeKhaya, elikwiChibi elihle leCanyon! Ukuhamba ngokufutshane ukuya echibini kunye neendlela ezahlukeneyo zesikhephe kunye nomgama omfutshane ukuya ezantsi edolophini iCanyon. Le bhedi ye-3 / ibhafu ye-2 ye-1, i-226 sq.Ft.ekhaya ihleli kwikota yehektare. Ifriji ifakiwe kwintengiso yekhaya. Inkxaso mali yomthengisi iyafumaneka.
Nxibelelana nentengiso 210490xxxx
I-Texas (, ekuhlaleni; ISpanish: iTexas okanye iTejas, ebekiweyo [ˈtexas] (mamela) yindawo ekuMazantsi e-Nxweme eseMelika. Yeyesibini ngobukhulu ilizwe lase-US ngommandla (emva kweAlaska) kunye nabemi (emva kweCalifornia). ITexas yabelana ngemida kunye neLouisiana ukuya empuma, iArkansas kumantla-mpuma, i-Oklahoma emantla, iNew Mexico ukuya ngasentshona, kunye neMexico yaseChihuahua, eCoahuila, eNuevo León, naseTamaulipas kumazantsi-ntshona, kwaye inonxweme neGulf yeMexico ukuya emazantsi mpuma. IHouston sesona sixeko sinabantu abaninzi eTexas kwaye yeyesine ngobukhulu e-US, ngelixa iSan Antonio ingowesibini kwabona baninzi kurhulumente kwaye isixhenxe sikhulu e-US Dallas-Fort Worth kunye ne-Greater Houston yindawo yesine kunye neyesihlanu ngobukhulu kwi-Metropolitan. kwilizwe, ngokulandelelana. Ezinye izixeko eziphambili zibandakanya iAustin, eyona ndawo yesibini inabarhwebi e-US, kunye ne-El Paso. I-Texas ibizwa ngokuba yi "Lone Star State" ngenxa yobume bayo bangaphambili njengezimeleyo, kwaye njengesikhumbuzo somzabalazo wombuso wenkululeko eMexico. I- "Lone Star" inokufumaneka kwiflegi yesizwe saseTexas nakwitywina laseTexas. Imvelaphi yegama laseTexas lisuka kwigama elithi taysha, elithetha "izihlobo" kulwimi lweCaddo.Yiya ngobukhulu bayo kunye neempawu zejogragi ezinjengeBalcones Fault, iTexas inemimandla eyahlukeneyo eqhelekileyo kwimimandla eseMazantsi naseMazantsi-ntshona. Nangona iTexas ithandwa kakhulu ngokunxulumana neentlango zasentshona zase-US, ingaphantsi kweshumi pesenti yomhlaba waseTexas iyintlango. Uninzi lwamaziko oluntu akwiindawo ezinendawo ezidumileyo, ingca, amahlathi kunye nonxweme. Ukuhamba usuka empuma usiya entshonalanga, umntu unokujonga umhlaba ovela kwiinduli ezingaselunxwemeni kunye neenkuni zepine, ukuya kumathafa aneenduli nakwiinduli ezigumileyo, kwaye ekugqibeleni yintlango kunye neentaba zeBig Bend. Ibinzana elithi "iiflegi ezintandathu ngaphezulu kweTexas", libhekisa kumazwe aliqela athe alawula umhlaba. ISpain yayililizwe lokuqala laseYurophu ukubanga nokulawula indawo yaseTexas. IFransi yabamba ikoloni ehlala ixesha elide. IMexico yayilawula loo mmandla de kwangowe-1836 xa iTexas iphumeleleyo, yaba yiRiphabliki ezimeleyo. Ngo-1845, iTexas yajoyina umanyano njengelizwe lama-28. Ukumiswa korhulumente kwashenxisa uthotho lweziganeko ezakhokelela kwimfazwe yaseMexico naseMelika ngonyaka we-1846. Ilizwe lamakhoboka ngaphambi kweMfazwe yaseMelika yaseMelika, iTexas yabhengeza ukuba isuka e-US kwangoko pha ku-1861, yaze yajoyina i-Confederate States yaseMelika ngo-Matshi. 2 yonyaka omnye. Emva kweMfazwe yamakhaya kunye nokubuyiselwa kokumelwa kwayo kurhulumente wobumbano, iTexas yangena ixesha elide lokuzinza kwezoqoqosho. Ngokwembali amashishini amane amakhulu abumba uqoqosho lwaseTexas ngaphambi kweMfazwe yesibini yeHlabathi: iinkomo kunye nentshontsho, umqhaphu, amaplanga kunye neoyile. Ngaphambi nasemva kweMfazwe yaseMelika yaseMelika umzi mveliso weenkomo, iTexas eze kulawula, wayengumqhubi wezoqoqosho ophambili kurhulumente, ngaloo ndlela esenza umfanekiso wesiko lenkomo yaseTexas. Ngenkulungwane ye-19 ikotoni kunye namachibi akhula aba ngamashishini amakhulu njengoko ishishini leenkomo laya lincipha. Ekugqibeleni, yayikukufunyanwa kweedola ezinkulu zepetroleum (uSpindletop ngokukodwa) oqalise ukukhula koqoqosho okuyeyona nto ibangela uqoqosho lube ngaphezulu kwenkulungwane yama-20. Utyalomali oluzinzileyo kwiiyunivesithi, iTexas yaqhubela phambili ukuphucula ezoqoqosho kunye nomziveliso wobugcisa obuphakathi kwinkulungwane yama-20. Ukusukela ngonyaka ka-2015, kungolwesibini kuluhlu lweenkampani ezingama-500 ezixabisa kakhulu ezingama-54. Ngomgangatho okhulayo weshishini, urhulumente ukhokelela kumashishini amaninzi, kubandakanya ukhenketho, ezolimo, ipetroli, amandla, iikhompyuter kunye ne-elektroniki, i-aerospace, kunye ne-biomedical inzululwazi. I-Texas ikhokele i-US kwimali engeniso yokuthumela kwelinye ilizwe ukususela ngo-2002 kwaye iyeyona mveliso yesibini kurhwebo oluphezulu. Ukuba iTexas ibililizwe elizimeleyo, ibiya kuba yeyonaqoqosho yeshumi ngobukhulu emhlabeni.